Galmudug oo ka digtay afduubka ku soo kordhay Deegaanadaas iyo isku socodka gaadiidka oo istaagay.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Galmudug oo ka digtay afduubka ku soo kordhay Deegaanadaas iyo isku socodka...
Galmudug oo ka digtay afduubka ku soo kordhay Deegaanadaas iyo isku socodka gaadiidka oo istaagay..
waxaa joogsaday isu socodka Gaadiidka Degmooyin katirsan Gobollada Galgaduud & Mudug sabab la xiriirta cabsi ka dhalatay Dagaal Beeleedyo, Afduub & Jidgooyooyin ay dhigteen maleeshiyaad hubeysan.
Dadka ayaa ka cabsi qaba afduub todobaadyadii la soo dhaafay kusoo kordhay Deegaannada maamulkaas oo marka lacag madax furasho ah laga qaato dib xorriyadooda loo siiyo, meelaha qaar waxaa ku kordhay dilalka aanooyinka la xiriira & isku dhacyada Beelaha.
Wasaaradda Amniga DG Galmudug oo dhawaan sheegtay in ay gacan adag ku qabaneyso dhibaatooyinka cusub ee soo kordhay ayaa dadka ku howlan arrintaan uga digtay in ay ku dhiiradaan, waxaana ay sheegtay in cadaaladda la horgeynayo qofkii lagu soo qabto falalkaan.
Guriceel & Xeraale waxaa ku xayiran Gawaari labada dhinac isaga kala gudbi rabtay, qaarkood ayaa dib ugu laabtay Degmada ay ka tageen kadib markii lagu wargeliyay in wadada dhexe ay joogto maleeshiyo hubeysan.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Puntland oo ka dayrisay soo laba kaclaynta xanuunka Covid 19
Next articleDagaal ka dhacay Degaanka Gaaragoyle oo 15KM u jirta Deegaanka Gadoon oo aan ka fogayn dhuusamareeb
Marxaladda soo labo kacleynta xanuunka Safmarka ah ee COVID-19 oo saameyn balaaran ku yeelatey Dalka oo dhan ayaa todobaad gudihii Galmudug laga diiwaangaliyey 13-kiis...